Izangqa zeNtlalo kunye nendlela esiQhagamshela ngayo - Khetha Uphawu
Izangqa zeNtlalo kunye nendlela esiQhagamshela ngayo
Indlu yeshumi elinanye isinika ulwazi kubomi bethu bentlalo, indlela esinxibelelana ngayo nohlanga lwabantu kwinqanaba elibonakalayo lobukrelekrele, kwaye kunokubonakala kungahambelani nentsingiselo yethu yokunxibelelana komntu nehlabathi kunezinye iindawo zobomi. Sekunjalo, amandla ayo okukhululwa kunye nemivuzo yawo kumntu esimakhele ngaphakathi kwisiseko sethu yinto engenakufumaneka kuyo nayiphi na enye indlu yetshathi yokuzalwa. Ixabiso kunye nokubaluleka kwayo kufanele kube yinto esiyihlalutya kanye njengoko besiya kuqwalasela kuyo nayiphi na enye into.
Ubuhlobo kunye neNkxaso
Ekubeni indlu yeshumi elinanye isibhozo ukusuka kwethu indlu yesine (izindlu eziphuma kwi-derivative) ithetha ngomngeni wokwenene woMphefumlo wethu kobu bomi ukuba wamkele imizabalazo yawo kumlinganiselo obanzi. Akumangalisi ukuba abahlobo bethu bahlala benxibelelana nathi ekuqondeni izinto ezingakhange zifunwe kakuhle ngamalungu entsapho yethu. Ngokucacileyo sikho ukuze siphilise amanxeba omnye komnye ngokweemvakalelo asithintelayo kwaye asenze sizive ngathi asingobakhe. Wonke umcimbi ongasifumananga isikhundla sawo esifanelekileyo kumnombo wosapho lwethu nakwikhaya lethu, uya kuba nethuba lokuzibonakalisa kunxibelelwano esiludalayo ngokumelwa okubanzi kwenkqubo esikuyo apha, eMhlabeni - kwisangqa sethu sentlalo.
Indlu yeshumi elinanye iya kuthetha ngabahlobo bethu kunye noluhlu olubanzi lonxibelelwano loluntu, ngoxinzelelo kunye nokungaphezulu kokunxulumana, kwaye isinike izipho zenkqubela phambili ngamaqhina anentsingiselo esiwakhayo ngaphandle kosapho lwethu. Ngandlela thile, inkqubela yethu yobuqu ukuya kumntu wenene esinqwenela ukuba nguye (omelwe yinjongo yethu ephambili ebomini kunye indlu yeshumi ) iya kubonwa kwihlabathi lezinto eziphathekayo ngoqhagamshelwano olusondeleyo esilwenzayo nabantu abanganxulumananga nathi ngegazi okanye ukubandakanyeka kwezothando. Abahlobo bethu babalisa ibali labo, malunga nokwamkelwa kweekona ezifihliweyo zoMphefumlo wethu kunye nezinto abazali bethu ababenobunzima bokwenza i-metabolizing.
Isizwe sethu kunye neNkululeko yethu
Amaqela amakhulu abantu anamathelayo abenza bazive beyinxalenye yabo bonke ababandakanyekileyo, yaye ngenxa yokungavisisani okufumaneka phakathi kwamalungu alo, kuba lula ngabo bakuyo ukuziqhelanisa nazo zonke ezinye iinkalo zobomi. Nangona kunjalo, kunqabile ukuba amaqela asebenzayo ancede umntu oyedwa azive ekhululekile kuyo yonke imizabalazo yakhe yangaphakathi, njengoko ehlala ehluthwa unxibelelwano olunzulu lweemvakalelo kunye nolwazelelelo kunye nawo onke amalungu esizwe. Abanye abantu baya kuba kumaqela anjalo, babambelele kwisangqa ukuze nje babe nesangqa abanokuthi basibize ngesabo, kwidabi labo lokuba ngamalungu. Abanye baya kudala ezabo izangqa, benze ubudlelwane obuhlala buhleli kunye nobunzulu nomntu ngamnye kwiqela labo, ekugqibeleni babahlanganise bonke. Ubume obukrazukileyo be Aquarius kunye nendlu yethu yeshumi elinanye ibonwa ngcono ngolu nxibelelwano luchuliweyo phakathi kwabahlobo bethu abaphuma ngokupheleleyo kulawulo lwethu kodwa basinceda sibone indawo ephakathi kwiingxabano zethu zangaphakathi.
Xa indlu yeshumi elinanye yomntu ibacinezela, ngokuqhelekileyo iya kubonwa ngamabhondi angaphezulu anenjongo eyodwa yokwabelana ngolwazi ngaphandle koqhagamshelwano oluninzi lobuqu. Oku kubakhumbuza ngoko nangoko ngomntu abanqwenela ukuba nguye, njengoko indlu yabo yeshumi yenzelwe ukusebenza njengesikhululo seenqwelomoya kuko konke ukusondela abakufunayo kwihlabathi langaphandle. Indlu yeshumi elinanye yenzelwe ukuba ibe licala elimnyama okanye elinye icala losapho lwethu elibandakanya iindawo ezingekhoyo zoMphefumlo wethu endaweni yazo kwaye zisenze siphelele. Ukuba akunjalo, mhlawumbi asizange sifezekise iinjongo zethu eziyinyani kwaye sisafuna ukuba sicinge ngathi kuqala, ngaphambi kokuba siguqukele kwimimiselo yentlalo kunye neendlela ezivela kwinkqubo engeyiyo eyethu.
Ukuphila ubomi bethu obukhululekileyo, ngumsebenzi wethu ukuba ngumntu umntwana wethu wangaphakathi afuna sibe nguye. Kuphela xa sihamba kakuhle siya kuba nethuba lokudibanisa kwinqanaba eliphezulu lonxibelelwano kunye nokuqonda kunye nesizwe sethu sokwenyani. Ukuba siyazincama, ubuhlobo bethu buya kuphelelwa yaye bubi. Ukuba siyazakha, siya kudibana nabantu abanomgangatho onzulu ukusinceda siqonde indlela yethu ngcono. Abahlobo bethu bema njengengalo eyolulayo yokukwazi ukulandela ubizo lwethu lokwenyani kwaye beme phakathi kweenjongo zethu kunye neengcinga zethu njengebhulorho edibanisa ezi zimbini. Nanini na xa siqhawula unxibelelwano kwiitalente zethu kunye nobizo, ubomi bethu bentlalo buya kubandezeleka, busibonisa ukuba kufuneka sitshintshe kwaye samkele into esiyinqwenela ngokwenene endaweni yokuyibeka ecaleni ngenxa yesimo okanye impumelelo yobungcali engayi kukwanelisa ulonwabo lwethu, undoqo wobuntwana.
I-Capricorn Leo Pisces Gemini Umhlaza